ပရိသတ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အများကြီးစိတ်ပူပန်ပေးနေတဲ့ D.O. လေး
EXO အဖွဲ့ဝင် ဆိုလည်းဟုတ် …မင်းသားလည်း ဖြစ်တဲ့ D.O. ဟာ လတ်တလောမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးနေရလို့ မအားမလပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပရိသတ်တွေကိုတော့ bubble chat မှာ အချိန်ပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံး သူ့ရဲ့ chatroom background ပြောင်းသွားလို့ ခုလို အူတူတူလေးနဲ့ ချစ်စဖွယ်မေးခဲ့ပါတယ်။”ဘာလို့ chatroom ထဲမှာ သရဲရောက်နေတာလည်း? Background က ဘာလို့ ပြောင်းသွားလည်း မသိဖူးနော်… Oh…Halloween နီးနေလို့ကို”
D.O. ဟာ ဆက်လက်ပြီး သူလက်ရှိလုပ်နေတာတွေကို ခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “အားလုံးဘဲ နေကောင်းကြတယ်မလား .. ကျွန်တော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာ2ခန်းဘဲ ရိုက်စရာကျန်တော့တယ်…”The Moon” movie ရိုက်ပြီးသွားရင်လည်း နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခု တန်းလုပ်ဖို့ရှိတယ်”
Fan တွေရဲ့ reply တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ခုလို ဂရုတစိုက်နဲ့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ “နေကောင်းပါတယ်လို့ အားလုံး ပြန်ဖြေတာမို့ စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ဗျ” ဟင်…တချို့ နေမကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ရှိသေးတာဘဲ .. မကြာခင် ပြန်နေကောင်းလာဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျ … အမြန်ဆုံးသက်သာလာပါစေနော်…ကျွန်တော်ကတော့ ကာကွယ်ဆေး အကုန်ထိုးပြီးပါပြီဗျ”
Fan တွေက လွမ်းနေတာကို သိနေတဲ့ပုံပါဘဲ။ D.O. က ခုလို အချွဲစကားလေးလည်း နောက်ဆုံးပိတ်ပြောသွားပါသေးတယ်။ “ကျွန်တော်သိပါတယ်…ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွေ့ခွင့်မရှိတာ အတော်ဆိုးတာဘဲ…အားလုံးကို အမြဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့လည်း ကောင်းကောင်း အိပ်ရာဝင်ကြပါ။ ကျွန်တော်နောက်မှ ထပ်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်”
D.O. ဟာ Fan တွေကို သူငယ်ချင်းလို သဘောထားပြီး သိပ် မ ro တတ်ပေမဲ့ ခုလိုစိတ်ရင်းနဲ့ နွေးနွေးထွေးပြောတတ်တာဟာ တကယ်ချစ်စရာလေးပါ။ ဒါကြောင့် ပင်ကွင်းပေါက်လေးကို fan တွေသည်းသည်းလှုပ်ချစ်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။
Next Jisoo နဲ့ Son Heung Min တို့ရဲ့ Dating ကောလဟာလကို ငြင်းဆိုချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ YG »
Previous « အနုပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ သာမန်လူ​တွေနဲ့ လက်ထပ်​တော့မယ့်အ​ကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အသိ​ပေးခဲ့ကြတဲ့ Idol များ